မျိုးမြန်မာပြည်ရွာ ၊ တို့စောင့်ရှောက်ဖို့ပါ သေရင်လည်းမကြောက်ပါ ၊ ရင်မြေကတုတ်ပါ - Yangon Media Group
”နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ ချိုးဖောက်ရာ ရောက်သည့် သဲအိတ် ၊ အိုဗာဟက်ပစ်ကျင်းနှင့် ဘန်ကာများ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ခြမ်း၌ ပြုလုပ်ထား၍ တရားဝင်ကန့်ကွက်” အထက်ဖော်ပြပါ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ မေ ၁၂ရက်နေ့ထုတ် စာမျက်နှာ ၁ဝတွင် သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်ရှုရသည်။
အဆိုပါသတင်း၏ အကျဉ်းချုပ်ကို ဖော်ပြရလျှင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ ချိုးဖောက်ရာ ရောက်သည့် သဲအိတ်၊ အိုဗာဟက်ပစ်ကျင်းနှင့် ဘန်ကာ များကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ခြမ်းတွင် ပြုလုပ်ထား၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များက ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး တရားဝင် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် တောင်ပြိုလက် ဝဲဘက်အနီး နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် အမှတ် ၃၄နှင့် ၃၅ တို့နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ တောင်ဘရိုးကျေးရွာမှ အောက်ဘာ့ရ်ှဘာရီကျေးရွာအထိ အမှတ် ၃၄ BGB တပ်ရင်းမှ သဲအိတ်၊ အိုဗာဟက်ပစ်ကျင်း၊ သဲအိတ်နှင့် မြေ သားအိုဗာဟက်ပစ်ကျင်းသုံးကျင်း၊ မြေသားဘန်ကာတစ်ခု၊ ကွန်ကရစ်ဘန်ကာတစ်ခု ကာရံထားသည့် နေရာ ခုနစ် နေရာအား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး BGB နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ များက နေ့ညစောင့်ကြပ်လျက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါဖော်ပြသတင်းနှင့်အတူ သတင်းဓာတ်ပုံများ ကိုလည်း ပူးတွဲဖော်ပြထားရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက် ခြမ်း နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ် ၁၅ပေအကွာ၌ သဲအိတ်နှင့် အိုဗာဟက်ပစ်ကျင်းများ ဓာတ်ပုံပါရှိသည်။ အခြားဓာတ် ပုံများတွင်လည်း အိုဗာဟက်ပစ်ကျင်းများ၊ ကွန်ကရစ်ဘန် ကာများ၊ သဲအိတ်များ စသည်ဖြင့် သတင်းဓာတ်ပုံများ ထင်ရှားစွာ ရှုမြင်ရသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ သတင်းနှင့်ဖြစ်ရပ်များ၊ သက်သေခံဓာတ်ပုံများကို မြင်တွေ့ရသောအခါ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင် ပြည်နယ်မှ စတင်တောက်လောင်လာသည့် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် နှင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခမီးမှာ ယခုအခါ အကျယ်အကျယ် မငြိမ်းဖွယ်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတို့အကြား ကြီးမားသောပဋိပက္ခ ကြီးတစ်ခုဆီသို့ ဦးတည်နေသည့်ပုံသဏ္ဌာန် မြင်နေရသော ကြောင့် စိတ်မကောင်းပါ။
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ဝ ရက်တွင် တစ် ကြိမ်၊ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၅ ရက်တွင် တစ်ကြိမ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသော ARSA ဘင်္ဂါလီ လူဆိုးအကြမ်းဖက်သမားတို့၏ ပြဿနာသည် ယနေ့အချိန်အထိ အေးငြိမ်း၊ ပြီးပြေသွားမလိုလိုနှင့် ဘင်္ဂ လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတို့အကြား မီးပွားများ တစ်စထက်တစ်စ တိုးတက်ဆင့်ပွားလာသည် ကို တွေ့မြင်ရသည်။
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၅ ရက်တွင် တစ်ဖက်နိုင်ငံ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ဝင်ရောက်လာကြသည့် ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမား လူဆိုးများ ရာထောင်ချီ၍ မြန်မာ့လုံခြုံ ရေးစခန်း ၃ဝ ကို တစ်ပြိုင်နက် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြ သည်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘက်မှ ထိုနေ့က အရေးအခင်း ပဋိပက္ခကြောင့် လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်း များ၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ များစွာအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီး ထိုပဋိပက္ခမီးမှ ဖြစ်ပွားလာသည့် နိုင်ငံရေးမီးတောက်မှာ ယနေ့ထက်တိုင် မငြှိမ်းသတ်နိုင်ဘဲ ရှိသည်ကို တွေ့ရ၏။
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၅ရက် ARSA ဘင်္ဂါလီလူဆိုးများ၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကို မြန်မာ့တပ် မတော်နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက စနစ်တကျ ပြန်လည် တွန်းလှန်မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့သည့်မှတ်တမ်း ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ဒုတိယ အင်္ဂါနေ့တွင် စတင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သော ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး၏ (၇၂)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံသို့ မူလပထမ တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောရန် အစီအစဉ်ရှိသော် လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ARSA ဘင်္ဂါ လီလူဆိုးတို့၏ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း၌ စီမံဆောင်ရွက်ရန်များ ရှိသောကြောင့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံသို့ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင် နရီဗန်ထီးယူကိုသာ စေလွှတ်ခဲ့ရသည်။
သို့သော်လည်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ARSA အကြမ်းဖက်သမားတို့၏ ကျူးကျော်တိုက် ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ က တရားဥပဒေနှင့်အညီ မည်သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေ ကြောင်းကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းက နေ ပြည်တော်၌ ကျင်းပသည့် အခမ်းအနားတစ်ခုတွင် နိုင်ငံ ခြား သံတမန်အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်များ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ မီဒီယာသမားများအား ဆွေးနွေးရှင်းပြသည့်မှတ် တမ်း ရှိသည်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နယ်မြေကို ဘင်္ဂ လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ARSA ဘင်္ဂါလီလူဆိုးများ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်သည့်ပြဿနာမှာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ လက ကျင်းပသည့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် မထိန်းနိုင်၊ မသိမ်းနိုင်၊ ကန့်ကွက်ချက်များ၊ မကျေနပ်ချက် များ၊ အပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ အမေရိကန်၊ ဂျာမနီ အပါအဝင် အနောက်ဥရောပ အင်အားကြီးနိုင်ငံတို့က လည်းကောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ အထွေ ထွေ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် အစ္စလာမ္မစ် ၄၁နိုင်ငံတို့က လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တရား မဲ့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချ ကြေညာချက်များ ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
ထို့အပြင်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက ကျူးကျော် လာသူ ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများကို နှိမ်နင်းရာတွင် အလွန်အကြူး အင်အားသုံးခဲ့သည်ဟု လည်းကောင်း၊ ရခိုင် ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်မှ တိုင်းရင်းသားပြည်သူ အများကို မတရားဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု လည်း ကောင်း စွပ်စွဲချက်များ ကမ္ဘာအနှံ့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဘင်္ဂါလီ ခြောက်သိန်းကျော်သည် မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့၏ အန္တရာယ်မှ ရှောင်တိမ်း ရန်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော် လျက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့ရာ ဂြိုဟ်တု မှ ရိုက်ကူးထားသည့် လူခြောက်သိန်းကျော်တို့၏ ထွက်ခွာ ပြေးလွှားနေသည့် သတင်းဓာတ်ပုံများမှာ VOA, BBC နှင့် အခြားရုပ်သံလွှင့် သတင်းအစီအစဉ်များတွင် မြင် မကောင်း ရှုမကောင်း တွေ့နေရသည်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရသည် ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံသွားသူ ခြောက်သိန်းကျော် အား ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာရန် ဘင်္ဂ လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအပါအဝင် တာဝန် ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကြိမ်ဖန်များစွာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း တိုင်ပင် ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနများတွင် အထင်ကရ ပျံ့လွင့်နေသည့် သတင်းဆိုးများစွာတို့၌ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် အကြမ်းဖက်သမား ၁ဝဦးအား သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဆို သည့် သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယခုအခါတွင် အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူ အရာရှိနှင့် အခြား အဆင့် ခုနစ်ဦးတို့အား တပ်မတော်မှ ရှုတ်ချထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီး ထောင်ဒဏ် ၁ဝနှစ်စီ အရပ်သား အကျဉ်းထောင်တွင် ကျခံစေရန်လည်း စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်လည်း ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အား ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်၍ အပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်း အဆိုကို ဗြိတိန်နိုင်ငံ ကုလ သမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်က တင်သွင်းခဲ့ရာ တရုတ်နိုင်ငံက ထိုအဆိုမှာ တရားမျှတမှု မရှိကြောင်းနှင့် ဗီတိုအာဏာသုံးကာ ပယ်ချခဲ့သည်။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံကမူ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် တစ်သဘောတည်းဖြစ်ပြီး ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုးသမီးက ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခကိစ္စမှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ပြည်တွင်းကိစ္စတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ပြည်ပအင်အားကြီးနိုင်ငံများက ဝင်ရောက်စွက်ဖက် ရန် မသင့်ဟု သဘောထား မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
ယခုအခါတွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည့် တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ARSA ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်တိုက် ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအစိုးရနှင့် ကျယ်ပြန့်သော ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ် ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား သဘောထားကွဲပြားမှုများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေရှင်းဆွေးနွေး အောင် မြင်ခဲ့ပြီးလည်း ဖြစ်သည်။
ဤအခြေအနေတွင် ဤဆောင်းပါးအစတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်ခြမ်း၌ ယခုကဲ့သို့ သဲအိတ်များ၊ ဘန်ကာကျင်းများ၊ ကွန်ကရစ်ဘန်ကာများ တည် ဆောက်ထားသည်ဆိုသည့် သတင်းဓာတ်ပုံများကို မြင်တွေ့ရသောအခါ များစွာမှ နားမလည် နိုင်စရာ ဖြစ်တော့သည်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသည် မည်သည့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကိုမှ ထိပါး၊ ရန်စ၊ ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်မည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော် တပ်မတော်စစ်ချီသီချင်းတစ်ပုဒ်တွင် တပ်မတော်သားများ သီဆိုခဲ့သည့် သီချင်းစာသားအတိုင်း ‘မျိုးမြန်မာပြည်ရွာ၊ တို့စောင့်ရှောက်ဖို့ပါ၊ သေရင်လည်း မကြောက်ပါ၊ ရင်မြေကတုတ်ပါ’ဆိုသည့်အတိုင်း မိမိ၏နယ်မြေကို ထိပါးကျူးကျော်လာလျှင် တစ်လက်မမျှ အကျူးကျော်မခံ အသက်စွန့် တိုက်ခိုက်စောင့်ရှောက်ကာကွယ်မည်သာဖြစ် ကြောင်း ဖော်ပြရပေသည်။
မြန်မာအစိုးရ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် အဓိကစိန်ခေါ်မှုများ
ဘားအံမြို့ ယခင် ကားဝင်းဟောင်း မြေနေရာ၌ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အဆင့်မြင့် ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခု တည်?
တာလေမြို့၌ မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် နေအိမ်များအတွင်း သဲနုန်းများ ဝင်ရောက်၊ ကြက်မျ??